Hupenyu hwakanaka hwevane gay muBangkok | Kufamba Nhau
Hupenyu hwakanaka hwevane gay muBangkok
Mariela Carril | | Bangkok, Kufarira, Tailandia, Asia kufamba
Bangkok ndiro guta guru reThailand, nyika inofungidzirwa nevazhinji vafambi seimwe yenzvimbo dzakanakisa muAsia kana zvasvika kune zvinhu zviviri: mabheji anoyevedza uye hupenyu hwehusiku.
Vazhinji vashanyi vanofunga kuti Bangkok ndiyo mecca yekushanyirana ngochani muAsia nekuti pane zvakawanda mabhawa, saunas uye makirabhu ehusiku ngochani Saka kana iwe uchida pfungwa yekuenda parwendo nekusanganisa mahombekombe, kushanya kwakachipa (Thailand haizi nyika inodhura), tsika uye husiku husiku Bangkok inoita kunge yekutanga munzira.
Iyo nzvimbo inoita guta uye guta rinoita iyo nzvimbo. Bangkok Iri pamuganho weRwizi Chao Phraya, nechepakati penyika, uye inogarwa nevanhu vangangoita mamirioni masere asi munzvimbo yemasabhabha mune vanhu zvakapetwa kaviri.
Kunyangwe iko kugadzirisa kwacho kuri kubva muzana ramakore rechiXNUMX uye fue muzana ramakore rechiXNUMX yakava nzvimbo yepakati yenharaunda, yainzi Siam, kuvandudzwa kukuru kweguta kwakaitika muzana ramakore rechiXNUMX. Sezvo zvinowanzoitika kana guta inokura kunze kwekudzora kana purojekiti, mhedzisiro yacho chinhu chisina chimiro, chisina kukwana mabasa eruzhinji uye zvakanaka mhirizhonga.
Kubva pane imwe nguva kusvika pachikamu ichi hurumende yagadzirisa zvimwe, kunyanya mukutakura, asi kune vanhu vazhinji vanogara pamwe chete, ruzha rukuru, mwenje yakawanda kwazvo, zvekuti Bangkok iri kuzokuvhundutsa, kunyangwe hongu, ndinofunga kuti husiku iri kuzokuvaraidza zvakanyanya.
Husiku husiku muBangkok
MuBangkok kune akawanda mabhawa, makirabhu uye saunas uye nderimwe remaguta akanakisa pasi rose kubuda usiku hwakawanda kana kuita ngochani kunyanya. Hupenyu hwehusiku hweBangkok hune mukurumbira wekusango asi zvinofanirwa kutaurwa kuti hazvisiri izvo zvazvaimboita nekuti mumakore achangopfuura hurumende yakasimbisa kutevedzera mimwe mirau yekudzora kushandiswa kwezvinodhaka, kushama, zvirongwa nezvimwe.
Nhasi vazhinji ve mabhawa, madiscos uye maresitorendi anofanirwa kuvhara pamberi pa1am uye vashoma vanobvumidzwa kuenderera kusvika 2 am. Iwo akanyanya kusarongeka mabara akavhurwa husiku hwese, hongu, asi kwete iwo akarongeka zvakanyanya. Sevashanyi isu tinofanirwa gara uchitakura pasipoti yako nekuti mapurisa anogona kuibvunza kana kupinda mubhawa kana disco, kubatidza rambi, kukumbira magwaro uye kunyangwe kuita ongororo yemishonga. Kwete nguva dzose, kwete kazhinji, asi zvinogona kuitika.
Kufamba, pakati pehusiku hwese hwehusiku, mira naSalom. Guta rega rega rine nzvimbo yaro ngochani uye Silom ndizvo zvese zviri pano. Zvese. Mumigwagwa yeSalom iwe unowana maresitorendi, mabhawa, mahotera emhando yepamusoro, masiketi marefu nemazana ezvitoro mumigwagwa zvinotarisisa vazhinji veko nevatorwa.
Izvo zvitoro zvinotengesa zvishoma zvezvose, kubva pambatya kusvika kuchikafu, nemitengo yakachipa. Kwete kuti nzvimbo ino yese ngochani saka pane izvi unofanirwa kunongedzera kumigwagwa mikuru iri: Silom Soi 2, Soi 4 ​​uye Soi Twilight.
Yekutanga yakapusa alley ane akati wandei makirabhu makirabhu, pakati pavo inozivikanwa kupfuura dzose, DJ Station. Pamusuwo, iyo yemahara, vanoongorora bhegi rako asi chakanaka ndechekuti mitengo yakafanana mumabhawa ese Uye iwe unogona kuenda kubva kubhawa kuenda kubhawa negirazi rako riri muruoko kunyangwe pawatenga kupi. Mimhanzi iri yepasi rose uye vateereri vakasanganiswa. Kune vanhu vanogara varipo, kunyangwe zvakati wandei pakupera kwevhiki.
Iyo disco yausingakwanise kupotsa ndeye Dj chiteshi. Iyo ine matatu pasi uye kune anoratidza e Dhonza vahosi saka ndiyo nzvimbo inonyanya kuzivikanwa mutaundi. Unogona kutora BTS kuChong Nonsi Station kana Sala Daeng, kana iwe unogona kutora MRT kuSilom Station. Kubva ipapo disco pane nhanho shoma kubva ipapo. Inowanzovhara pakati pa3 na4 mangwanani. uye kubvuma kwakachipa pamazuva evhiki, nechinwiwa chimwe chemahara, uye chinodhura pakupera kwevhiki nezvidhakwa zviviri.
Izvi zvimwe makirabhu ehusiku muSilom:
Lucifers Disko: vanhu vane nyanga, mimhanzi yemagetsi. Inovhura mazuva ese pakati pa7 manheru na2 am. Kupinda kuri mahara.
Soi Thaniya: iyo vibe iri yechiJapan. MuPatpong mune yakawanda yeJapan bhawa neresitorendi asi hazvireve kuti inzvimbo yeJapan.
9 Night Club: Ine nhurikidzwa nhatu uye nevanhu vazhinji. Iyo ine inonakidza kwazvo yekuzvuva mambokadzi show. Inovhura mazuva ese kubva na7 pm.
Tapas: inzvimbo ine ngochani asi kwete nzvimbo yeungochani.
Mugwagwa wechipiri ngochani unonzi Silom Soi 4, mugwagwa mupfupi uzere nemabhara evarume ngochani. Izvo zvakanaka kugara pasi nechinwiwa uye wotarisa vanhu vachipfuura. Iko kunakidzwa kunoputika pakati pa9 pm na12 am uye ndiyo yakajairwa saiti kutanga husiku usati waenda kunotamba. Iwo mabhaini akanyanya kubatikana ndiBalcony Barm iyo Iyo foni uye iyo Stranger Bar.
Ruwa rutsvuku rweBangkok iSoi Twilight kana Soi Pratuchai. Enda enda mabhawa, mukomana anoratidza y streepers uye izvo mhando yechinhu. Mune huwandu hwayo hukuru zvese zviri kufunga nezvekunze kushanya. Nzvimbo yacho izere nemwenje weeon kwese kwese uye vanhu vazhinji saka chokwadi ndechekuti nzvimbo ino haigone kutariswa.
Akanyanya kunaka ndeayo Thai anoratidza akapfekedzwa semombe, kana kuda kupfeka tinogona kutaura. Imwe yeakanakisa inoratidza anoita Bangkok Vakomana. Miviri isina kusimira? Chipo chiri pamberi? Iyi ndiyo Soi Twilight.
Muchidimbu, chii chinofanira kunge chiri pachena kwauri kana uchizoita zvekushanya ngochani muBangkok kuti kune nzvimbo nhatu dzekushanyira husiku uye unogona kuvashanyira vese nezuva rimwe chete ... kunyangwe ndichifunga kuti iwe unozonakidzwa nekunakidzwa.
Silom Soi 4 ​​ndiwo mugwagwa wevane gay mabara, Silom Soi 2 iwo mugwagwa wevane ngochani discos uye Soi Twilight mugwagwa webonde.. Chii chaunofarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Bangkok » Hupenyu hwakanaka hwevane gay muBangkok
7 zvinhu zvekuita parwendo kuenda kuAustralia
Matipi ekushanyira iyo Iguazu Falls iyi 2016